माउन्टेन इनर्जीकाे आइपिओ रिजल्ट कसरी हेर्ने ? - DURBAR TIMES
HomeShare Bazarमाउन्टेन इनर्जीकाे आइपिओ रिजल्ट कसरी हेर्ने ?
माउन्टेन इनर्जीकाे आइपिओ रिजल्ट भर्खरै सार्वजनिक भएकाे छ । आइपिओकाे रिजल्ट विभिन्न माध्यममा भने आउन केही समय लाग्नेछ ।
हामीले सर्वसाधारणहरूकाे सहजताका लागि आइपिओकाे रिजल्ट हेर्नमिल्ने केहि अनलाइन पाेर्टलहरू सजेस्ट गरेका छाैँ।
मेराे शेयरमा हेर्ने गर्ने तरिका
कृपया तल दिएको साधन लिन्कमा जानुहोला:
लग इन गर्नुहाेस्।
आस्वामा क्लिक गर्नुहाेस् ।
एप्लिकेशन रिपाेर्टमा क्लिक गर्नुहाेस्
माउन्टेन इनर्जी सेलेक्ट गर्नुहाेस्
– अलाेटेड कित्तामा हेर्नुहाेस्
रिजल्ट प्रकाशित भएपछि तपाइँहरूले हाम्राे वेभसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ । धन्यवाद
अन्य उपयोगी सामाग्री
Previous articleमेस्सीको गोल सेलेब्रेसनले बार्सिलोनालाई जरिवाना
Next articleकांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुनुपर्छ: वरिष्ठ नेता पौडेल